Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguEloisa
Iikhilomitha ezili-10 ukusuka eCapo d'Orlando, kunye neekhilomitha ezimbalwa. ukusuka eSant'Agata di Militello. Igumbi elinye, i-air-conditioning, kunye ne-Wi-Fi, indawo yekhitshi enkulu ene-oven yombane, i-oven microwave kunye ne-dishwasher, igumbi lokuhlambela elineshawa enkulu, indawo yokuphumla yangaphandle, kunye nabantu abatshayayo.
Kwindawo yokuhlala ezolileyo, kufuphi nolwandle, iziko kunye nemisebenzi yorhwebo, yonke into ngaphakathi komgama wokuhamba, ngaphakathi kwe-300/400 yeemitha, indawo yokupaka efanelekileyo phambi komnyango.
Wamkelekile kakhulu kwaye ukhathalelwe ngokusingqongileyo, isitayile sethaveni kunye neenkcukacha ezinje nge-chandeliers kunye ne-applique iziqwenga ezizodwa, zenza kube mnandi kakhulu, umnyango ozimeleyo kunye nendawo yokupaka ekunene phambi kwethaveni, iqinisekisa ubulula bokungena nokuphuma. naliphi na ixesha nge ukuzimela ubuninzi.
Indawo ezolileyo kakhulu, iivillas ezisanda kwakhiwa ezinendawo yokudlala yabantwana, ulwandle lwasimahla luxhotyiswe ngeeshawari zasimahla malunga neemitha ezingama-400.
Umbuki zindwendwe ngu- Eloisa
Ukufumaneka okuphezulu, i-H24, umnxeba, iinethiwekhi ezahlukeneyo zentlalo, iSMS, uMthunywa, i-imeyile, nangaliphi na ixesha.